Waa kuma C/qadir Shire Gudoomiyaha Cusub ee Mudug.? | BALIBUSLE.COM
« Dowlada Soomaliya oo ogolaatay in dalkeeda looga duulo Yaman.
(Faalo) Wadanka Giriiga Magdhow 278,7 bilyan oo Yuuro ah ka raba Jarmalka. »
Waa kuma C/qadir Shire Gudoomiyaha Cusub ee Mudug.?
(BB)Madaxweynaha dowladda Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo taariikhdu tahay 07 April 2015 Xilka Guddoomiyaha Gobolka Mudug u magacaabay Colonel C/qaadir Shire Faarax Ereg, ka dib markii uu xilkii ka qaaday Guddoomiyihii hore Maxamed Yuusuf Jaamac Tigey.
Colonel C/qaadir Shire Faarax Ereg oo hadda ku nool dalka Maraykanka Gaar ahaan Gobolka Seattle Washington ayaa ah shaqsi Taariikhdiisa ay ka dhex muuqato Ciidannimo, waxaana uu ka tirsanaan jiray Ciidamadii Booliiska Soomaaliya ee Dowladda Maxamed Siyaad Barre, isagoo Darajada Ciidannimada ka gaaray Colonel/Kornayl.
C/qaadir Shire Faarax Ereg waa Masuul Sharaf iyo Sumcad ku dhex leh ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland, waxaana muuqata inuu kasoo dhex muuqday Ballanqaadkii Madaxweynaha Puntland ee ahaa “Shaqo Kasta qof ku habbaan/ right person to the right position.
Masuulkaan Xilka loo magacaabay ayaa muddo ku noolaa dalka Maraykanka gaar ahaan Gobolka Seattle Washington, waxaana uu halkaas ku diyaariyey dhowr shahaado oo la xiriira Sharciyada iyo Aqoonta Booliiska iyo Laamaha Ammaanka.
Waa dhowr iyo Konton jir ku dhashay Degmada Jariiban ee Gobolka Mudug,waxaana loo magacaabay Gobolka Mudug oo ah Albaabka laga soo galo Dowladda Puntland, islamarkaasina ku yaalla meel xuduud ah ayna dhinaca ku hayaan Maamullo iyo Dowlado kale,waxaana looga fadhiyaa inuu wax badan ka badalo xaaladda Gobolka Mudug uu hadda ku sugan yahay, gaar ahaan dhinacyada ammaanka iyo horumarinta.
Ugu dambayntii Guddoomiyaha Cusub ee Gobolka Mudug Col. C/qaadir Shire Faarax Ereg ayaa lagu wadaa inuu dhawaan dalka soo gaaro, islamarkaasina uu xilka kala wareego Maxamed Yuusuf Jaamac Tigey oo xilka soo hayey muddo dhowr sano ah.